Isikuta esibhabhayo esivela kwimovie Buyela kwikamva kunye nenkqubela phambili | Ndinike ixesha lokuphola
Dibana nesithuthuthu esibhabhayo ukusuka kwi-Back to the future
UGabriela moran | | Cine, Ifilimu yesayensi
Ngokuqinisekileyo ubonile okanye, ubuncinci, uvile ngoYehova trilogy yefilimu eyimpumelelo Buyela kwixa elizayo. Ifilimu yokuqala yakhululwa ngo-1985 kwaye yaba yimpumelelo enkulu yonyaka. Yayinkulu kakhulu impumelelo yayo kangangokuba kwagqitywa ekubeni kukhululwe enye emva kweminyaka emine kunye noSteven Spielberg njengomvelisi! Kwakungu-en Le bhanyabhanya yesibini apho isithuthuthu esiphaphazelayo esivela kwimovie Buyela kwiKamva 2.
Iifilimu ezintathu zazikho Kudlala uMichael J Fox njengoMarty McFly kunye noChristopher Loyd njengososayensi osisigxina u-Emmet Brown. Ifilimu nganye ibeka abalinganiswa abaphambili kumaxesha ahlukeneyo enkosi ixesha lokuhamba kwi-DeLorian. Ngaphandle kwamathandabuzo, i-trilogy imele ukuqhubela phambili okubalulekileyo kuhlobo lwenzululwazi ngokukodwa. Kodwa ngaphezulu kwako konke, isavenge sesibini sivelise ulindelo olukhulu ngokubhekisele kwikamva kunye nophuhliso lwetekhnoloji oluya kubakho, injalo imeko yesithuthuthu kumdlalo bhanyabhanya. Funda ukuze ufumane zonke iinkcukacha malunga nale gajethi intsha kwaye yintoni entsha ngayo!
1 Isithuthuthu esiphaphazelayo esivela kwimovie Buyela kwikamva 2
2 Buyela kwangoku… Isikhumbuzo seminyaka engama-30 soluthotho sibhiyozelwa!
3 Ngaba isithuthuthu esiphaphazelayo esivela kwimovie Buyela kwikamva sele siyinyani?
4 Yintoni onokuyilindela ngoku?
5 Isithuthuthu sangoku
Isithuthuthu esiphaphazelayo esivela kwimovie Buyela kwikamva 2
Umlinganiswa ophambili ngu UMarty: ulutsha oluneminyaka eli-17 ubudala oluhlala luhamba lusuka kwindawo enye luye kwenye kwi-scooter Ukwayinxalenye yeqela lomculo wesikolo apho adlala khona ikatala. Unentombi egama linguJennifer kunye nomhlobo wakhe osenyongweni nguEmmmet, ososayensi omthatha ngexesha lokuhamba kwaye uchongwa ikakhulu njengo "Doc."
Ifilimu iqala ngo-1985 kwaye abalinganiswa abaphambili baya kwiminyaka engama-30 ezayo. Kufuneka bagqibe imishini ngo-Okthobha 21, 2015!
Buyela kwikamva 2 yenye yeefilimu eziphumelele kakhulu kuhlobo lwenzululwazi. Iziphumo ezizodwa zazinomdla ngexesha labo! Iinyani ezikude njengemifanekiso ye-XNUMXD, iimoto ezibhabhayo kunye nesithuthuthu esisetyenziswe nguMarty sikhulisiwe.
El Isithuthuthu esiphaphazelayo esivela kwimovie Buyela kwikamva saba ngumqondiso kubalandeli betrilogy. Ukudibana kukaMarty neendlela ezintsha zothutho kwenzeka ngengozi, njengoko yayiyindlela awayeyisebenzisa ukuphumelela umlo kwinxalenye ethile yebali.
Ngaphandle kwebali esinokuthi, ngaphandle koloyiko lokungalunganga, loo nto eyona nto ibalulekileyo kule filimu ngumbono abadali ababumba ngawo ikamva. Ifilimu ibonisa impendulo enokubakho kumbuzo ongunaphakade: liya kuba njani ikamva ngexesha elithile?
Buyela kwangoku… Isikhumbuzo seminyaka engama-30 soluthotho sibhiyozelwa!
Ixesha elizayo lisibambile kwaye unyaka wama-2015 ufikile! Abalandeli babejonge phambili ku-Okthobha 21. Oku, kuba kwifilimu yesibini, lowo yayingumhla obonisiweyo xa ukufika kukaMarty noDoc kweli xesha lethu kuya kwenzeka.
Kukhunjulwa isikhumbuzo seminyaka engama-30, amanye amazwe aphinde azikhupha iifilimu ezintathu zemidlalo yeqonga. A umyalezo osemthethweni ovela kuGqirha Emmet Brown Ukujongana nabalandeli be-saga kwaye kuboniswe ngezantsi:
Ukulindela kwakukukhulu njengoko uninzi lwezimanga zinokwenzeka. Yayilithuba lokuba iinkampani zilisebenzise ngokupheleleyo! Injalo imeko yento eyenziwe nguNike, uPepsi noLexus. Le nkampani yeemoto yokugqibela ivelise uhlobo lokuqala olunokuthelekiswa nesithuthuthu esidumileyo esibhabhayo esivela kwimovie ukubuyela kwixa elizayo 2.
Ngaba isithuthuthu esiphaphazelayo esivela kwimovie Buyela kwikamva sele siyinyani?
Iinkampani ezininzi zenze iiprototypes ukufezekisa imodeli esebenza ngendlela eyenziweyo ngesithuthuthu kwifilimu. Lexus, igama lemoto elidumileyo yenye yazo
Isilayidi ligama likaLexus lesithuthuthu esiphaphazelayo kwaye siyadada emoyeni kwaye sinokutyibilika ngaphezulu! Isixhobo sisebenzisa itekhnoloji esele ikho: amandla ombane. Kungenxa yoko le nto ngelishwa ingasebenziyo nakweyiphi na indawo, oko kukuthi, inokutyibilika kuphela kwimikhondo enomazibuthe abakhethekileyo.
Isilayidi seSilayidi sisebenza nge-nitrogen engamanzi njengamafutha, ukuthelekisa. Ke xa isikuta shushu, siphulukana nokuhamba kwaye kufuneka siphinde sizaliswe nge-nitrogen. Ukusetyenziswa komndilili kwesi sithuthuthu siphaphayo imalunga nemizuzu engama-20. ILexus yakhiwe eCubelles, idolophu ekufutshane neBarcelona, ​​umkhondo okhethekileyo ukuze uvavanywe.
Esi sithuthuthu siphaphayo Ayithengiswa, okomzuzwana ngumzekelo wodwa. Okokugqibela, uphawu luye lwasebenzisa ithuba lokuphuhliswa kwetekhnoloji yeSilayidi sayo kunye nesikhumbuzo sokuBuyela kwiKamva ukuyisebenzisa njengentengiso yeemoto zayo.
Yintoni onokuyilindela ngoku?
Iinkampani ziyaqhubeka nokuphanda kwaye zityale imali ekufumaneni itekhnoloji eyimfuneko yokuzisa isithuthuthu esiphaphazelayo ekudala sisilindile ukusuka kumdlalo bhanyabhanya ubuyela kwixa elizayo.
IHendo yinkampani kangangeminyaka eliqela eqale iprojekthi yesithuthuthu esiphaphazelayo esinokuthengiswa. Nangona iHendo Hoverboard ingasebenzisi i-nitrogen engamanzi, isenemida yokusetyenziswa kwayo.
UHendo usebenzise ingqokelela yokudibanisa evelise imali enomdla. Yintoni egqithisile uthengise ezinye iiprototypes ezixabisa i-10 lamawaka eedola zaseMelika kwisikuta ngasinye!
Enkosi kuphando kunye nophuhliso, UHendo uphuhlise iiprototypes ezininzi azenzileyo. Ndibabonisa lo mfanekiso ulandelayo:
I-trilogy yakhululwa ngo-80, ixesha apho i-scooter yayithandwa kakhulu njengendlela yokuhamba nokuzonwabisa. Akukho mntu unokucinga ukuba kunokwenzeka ukuba ufumane enye ibhabhayo! Ngokuqinisekileyo ukufakelwa kwesibini kwe-trilogy kuphakamise ulindelo ezingqondweni zababukeli. Ezinye zazo sele ziyinxalenye yobomi bethu bemihla ngemihla kwaye ezinye zimfutshane nje ukuba zibekho.
Eyona nto iyinyani yile Injongo yeenkampani ezininzi kukusungula isithuthuthu esiphaphazelayo esinemisebenzi efanayo naleyo isetyenziswa nguMarty McFly.
Okwangoku sinezixhobo ezikhoyo ezithengiswayo kwaye sele ithandwa kakhulu: ndibhekisa kwi izithuthuthu zombane kwaye baphefumlelwe ngumsebenzi womboniso bhanyabhanya.
Kuyinyani ukuba sisondela kwaye sisondela! Kubonakala ngathi ukumangaliswa kunokuza kwakamsinya kunokuba bekulindelwe ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndinike ixesha lokuphola » Cine » Dibana nesithuthuthu esibhabhayo ukusuka kwi-Back to the future
Iimuvi onokuzibukela kwiYouTube simahla (kwaye zisemthethweni)